Fahafatesana niniana natao :: Notsenain’ny fahafatesana ilay lehilahy nikasa hijery ny zafikeliny • AoRaha
Fahafatesana niniana natao Notsenain’ny fahafatesana ilay lehilahy nikasa hijery ny zafikeliny
Andro maloka sy nangidy tanteraka ho an’ny fianakavian-drandriamahefa phillipine, ny andron’ny 31 aogositra 2018. Maty noho ny setrasetra nataona tovolahy iray tamin’io andro io randriamahefa jean rodriguez, vady andefimandriny izay namela kamboty mirahavavy sy zafikely roa. Noho ny vono mafy nahazo azy dia tsy tana intsony ny ain’ity raim-pianakaviana ity, ary maty tsy tra-drano nanoloana ny mpiravo-mofo « gerb’or », teo mahamasina atsimo.
Setrasetram-piainana. Tamin’ny fomba feno habibiana no nahafatesan-dRandriamahefa Jean Rodriguez na i Rody , raim-pianakaviana, 47 taona, rehefa niharan’ny herisetra nataona tovolahy iray azy. Teo anoloan’ny mpivarotra mofo « Gerb’or », teo Mahamasina no nialany aina, taorian’ny daroka nahazo azy. « Nobatain’io tovolahy io izy ary natsatony nihoaka ambany ka avy hatrany dia namoy ny ainy », hoy Randrimahefa Phillipine na i « Fifie », vadin-dRatompokolahy. Araka ny fitantaran’ireo vavolombelona, dia filam-boatsiary tao amina trano fisotroana iray teo Ambanin’Ampahamarina no niteraka an’izao herisetra izao. Raim-pianakaviana tsy mba misotro zava-pisotro misy alikaola anefa i Rodriguez no nilan’ireo andian-jatovo vaniny. « Raha ny fitantaran’ireo nanatri-maso ny fifamaliana teo aminy sy ireo andian-jatovo ireo, dia toa nangatahan’izy ireo vola ny vadiko, izay tsy mba misotro toa azy ireo. Efa be mpahafantatra mantsy izy fa isan’ireo mba manome vola kely an’ireo tanora eny amin’iny toerana iny rehefa mba misy kely any aminy. Tsy nanana afa-tsy vola kely anefa izy tamin’io fotoana io ary voalaza fa somary tezitra tamin’ny fihetsik’ireto andian-jatovo ireto. Nisy mihitsy ny fikasihan-tanana azy tamin’izany ary very ny findain’ny vadiko satria nisy nisaka ny paosiny », hoy hatrany i Fifie. Taorian’izay fifamaliana sy fikasihan-tanana izay, dia niala tao amin’ilay trano fisotroana i Rodriguez ka nandeha moramora hamonjy ny vadiny eo Mahamasina. Rehefa teo anoloan’ny mpivarotra mofo teo amin’ny « Gerb’or » anefa izy dia nodarohana tovolahy iray izay nanaraka azy avy ato aoriana. « Avy hatrany dia nobatainy ka natsatony tamin’ny arabe ny lohan’i Rody, raha ny fitantaran’ireo nanatri-maso ka tsy nahetsika intsony vadiko », araka ny fitantaran’i Fifie, izay mbola vonton-dranomaso.
Hamonjy ny zafikeliny
Tamin’ny 3 ora tolakandro no nisehoan’ity tranga nampivarahontsana an’ireo mponin’i Mahamasina sy ny manodidina ity. Taitra avokoa ny ankamaroan’ny manodidina ary nampandre avy hatrany ny Zandarimariam-pirenena, tao Ankadilalana. « Nitsoaka io tovolahy io, saingy fantatry ny olona manodidina ety aminay ety. Tratra tao an-tranony izy ary noentin’ny mpitandro filaminana natao fanadihadiana. Saika tratran’ny fitsaram-bahoaka mihitsy izy, raha tsy teo ny mpitandro filaminana tamin’io andro io », hoy indray Randriamahefa Eulalie, zanak’i Rodriguez.
Tampoka tamin’ny fianakaviana ity tranga ity, ary teo am-piandrasana azy mihitsy i Phillipine vadiny no nisy nampandre ny zava-nitranga. « Tena tsy nampoiziko ary tena tsy nampino ahy ny zava-nitranga. Izy mantsy no mpitaiza ny zafikelinay, Jonathan, rehefa mody amin’io ora io. Niandry azy izahay, anefa hay izy nindaosin’ny fahafatesana», hoy i Eulalie. Namangy ny rahalahiny vao tera-bao i Rodriguez tamin’io andron’ny 31 aogositra 2018 io. Nanatitra rom-patsa ho an’ny vadin’ny rahalahiny no nialany tao an-trano tokotokony ho tamin’ny 12 ora antoandro. « Tokony mbola handeha hamangy fahoriana ihany koa izy tamin’ny 4 ora tolakandro. Nisy mpiara-mivavaka taminay maty ihany koa mantsy tamin’io fotoana io », hoy i Eulalie, zanany.
Tsy dia be teny
Raim-pianakaviana tso-piaina, tia vavaka ary tsy dia be teny firy Randriamahefa Jean Rodriguez na i Rody. Olona mamihoditra teo amin’ny fiarahamonina izy ary isan’ireo tena nahafatra-po teo amin’ny asa fanompoana an’Andriamanitra. Nanana andraikitra lehibe rahateo ity raim-pianakaviana ity teo amin’ny fiangonana nisy azy.
Isan’ireo mitety toerana maro miaraka amin’ireo namany avy any Etazonia eo anivon’ny fiangonana « Mormon » i Rody, ary efa an-taonany maro no nitoriany ny tenin’Andriamanitra, na teto an-drenivohitra izany na hatrany amin’ny faritra samihafa manerana an’i Madagasikara. Mpikambana mahafatra-po tao amin’ity fiangonana ity izy. « Mamy hoditra, mandefitra ary tia vavaka ny vadiko. Matetika izy no mibedy rehefa tsy mandeha mivavaka ny iray amin’ny fianakaviana », hoy i Phillipine vadiny.
Mariazy tany Afrika Atsimo
Isan’ny tena fialam-bolin’i Rody, ny mitaiza an’ireo zafikeliny. Mampihanta an’ireo zanany ihany koa izy, fony fahavelony. « Misy fotoana aza aho dia mbola tsenainy foana, na dia efa lehibe aza. Tiany ny zafikeliny ary izy mihitsy no tena mitaiza azy matetika. Tena sarotiny amin’ny fitaizana ny zafikeliny i Dada ary tsy nikely soroka tamin’ny fanampiana anay mianakavy tamin’izany. Tena mahafinaritra azy ihany koa ny miaraka milalao amin’ny zanako», hoy i Eulalie zanany.
Isan’ny fahatsiarovana tsy afaka ao an-tsain-dRazafimahefa Phillipine, vadin-dRatompokolahy ny nanaovana ny mariazin’izy ireo tany Afrika Atsimo. « Fotoan-dehibe teo amin’ny fiainan’ny fianakaviana izany ary tena tsy voakosoka ao an-tsaina sy ao am-po tokoa », hoy izy mitantara ary mbola vonton-dranomaso.
Naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora ilay tovolahy namono an’i Rody ary mbola miandry ny fitsarana azy amin’izao fotoana izao.
Faharavan’ny tontolo iainana Manomboka tandindonin-doza ny ambany atsinanan’i Manjakamiadana
Fitsidihana nitera-doza :: Mpizaha tany Espaniola maty nianjera avy eny ambony vato